दसैँका लागि नयाँ नोट भोलिबाट साट्न पाइने, प्रतिव्यक्ति कति पाइन्छ ? Bizshala -
काठमाण्डौ । नेपालीहरुको महान पर्व दसैँलाई लक्षित गरी भोलिबाट नयाँ नोट साट्न पाइने भएको छ।
उपत्यकाभित्रको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंकहरुका तोकिएका शाखा कार्यालयमार्फत नयाँ नोट साट्ने सक्नेछन्। उपत्यकाबाहिर पनि वाणिज्य बैंकहरुले तोकेको शाखा कार्यालयहरुबाट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसहित सातवटै प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सहटीको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले बताए।
नेपालका अनुसार दसैँका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको नयाँ नोट बजारमा पठाएको छ। पोहोरको दसैँमा नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गरिएको थिएन। पोहोर सुकिला नोटहरु साट्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एक व्यक्तिले बढीमा १८ हजार ५०० रुपैयाँसम्म नयाँ सटही गर्न पाउनेछन्। जसअनुसार रु. ५, रु.१०, रु.२०, रु.५० र रु.१०० दरका एक/एक बन्डलका दरले १८ हजार ५०० सम्म साट्न पाउने सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नयाँ नोट सटही गर्न जाँदा नेपाल सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले तोकेका स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड तथा सामाजिक दूरीको पूर्ण पालना गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।